Esory ny nify Stains Ary Discoloration Ireto Tips | Fomba tsara indrindra mahafotsy Teeth Guide
Esory ny nify Stains Ary Discoloration Ireto Tips
Nahazo ny nify fotsy araka izay azo atao dia mety ho lafo sy mandany fotoana. Misy fomba maro mba mahafotsy nify. Mampiasa ireo soso-kevitra dia afaka manampy mahafotsy nify in mora lamaody.
Ny zavatra voalohany izay tokony atao mba mahafotsy ny nify dia ny manatrika tsy tapaka nify cleanings. Ataovy azo antoka fa manatrika biannual fotoana fanadiovana amin'ny nify hygienist. Mety ho tsotra ny fotsiny fa avelao handalo indray andro sy ny drafitra amin'ny fanilihana angamba avo roa heny mafy rahampitso, fa zavatra tokony tsy hanao. Aoka solafaka indray mandeha, ary ianao mety latsaka any an-fahazarana dia mandehana miverina amin'ny efamira iray.
SOSO-KEVITRA! Ataovy azo antoka ny tsy kafe, divay sy ny sigara. Ireo vokatra simika misy maizina izay voalotoko ny nify.
Misy matetika nampiseho fa setroka sigara discolors ny nify.
Mora ny mahazo nify Whitening ravin, ary izy ireo dia tena lafo. Mametraka fotsiny ny esory eo amin'ny nify noho ny habetsaky ny fotoana nomena ao amin'ny toromarika, ary ny nify ho whitened. Ireo ravin efa nirona hanatitra mahantra vokatra, ary raha mbola nampiasaina mba ho tena malaza, ka tsy nividy ho be ny mpanjifa.
SOSO-KEVITRA! Rehefa avy nihinana ny sakafo, na misotro zava-pisotro, tokony avy hatrany hampiasa ny rano mba hosasany avy ny vavanao. Izany dia hanampy foana sisa amin'ny staining ny nify.
Floss sy miborosy nify, fara fahakeliny, indroa isan'andro. Izany dia manampy anao hiady takelaka alohan'ny afaka hanangana ka manao ny nify mijery nasty sy discolored. Tsy mamela ny takela-pahatsiarovana ny hipetraka eo amin'ny nify mandritra ny alina, miborosy ary floss alohan'ny alohan'ny hatory.
SOSO-KEVITRA! Mahafotsy ny nify ho azy amin'ny frezy. Frezy efa fantatra fa mamokatra fotsy nify.
Mety hampitombo anaty ny tsy fahazakana ny sasany nify Whitening mety mamokatra vokatra. Mety ho tena mafy ary mety ho fohy ny fotoana, fa mbola maharary. Raha mijaly izany fahatsapana, hitsidika ny mpitsabo nify eo anatrehanao foana ny mampiasa Whitening entana. Afaka manoro vokatra izay tsy ataony ny nify toy izany.
Hahazo ny check-miakatra avy amin'ny mpitsabo nify mba hahazoana antoka fa azo antoka ho anao ny mahafotsy ny nify. Aza mandany ny fotoana sy ny vola an-trano rehetra miezaka avy Whitening vokatra. Miantehitra amin'ny fahaizany ny mpitsabo nify ny dia lavitra fomba mahomby kokoa ny fitadiavana ny vokatra izay miasa tsara indrindra ho anao.
SOSO-KEVITRA! Misotro be dia be ny rano dia lehibe teknika mba hanampy foana ny nify fotsy. Rano fisotro madio amin'ny fototra matetika dia hanampy foana stains avy mamorona ka hiaro ny nify vao mafana hosasan.
Mety ilainao ny manao izany fotoana maro mba hahazo ny nify mijery tena voaloto.
Misotro alalan'ny mololo dia afaka manamaivana nify staining avy amin'ny zava-pisotro. Ny mololo manampy amin'ny fampihenana ny fotoana ny zava-pisotro tsy maintsy hampietreny ny nify. Ny ranon-javatra mandeha hidina mahitsy ny tendany fa tsy manao fifandraisana amin'ny nify.
SOSO-KEVITRA! Ny mpitsabo nify matihanina dia afaka mahazo vokatra tsara kokoa noho ny rehefa mampiasa ny mifanohitra vokatra. Io fomba ny nify Whitening fandaniana bebe kokoa, fa ny valiny dia avy hatrany.
Mety ho ny mpitsabo nify mahay manome anao torohevitra momba izay at-trano dia Whitening fitaovana mahomby, nefa tsy hanimba ny nify na ramy.
Omeo ny nifoka ny soa. Raha ny fifohana sigara no fantatra ho ratsy ho an'ny fahasalamana ankapobeny, izany ihany koa ratsy noho ny nify. Raha ny tena izy, iray amin'ireo famantarana mazava indrindra fa ny olona iray dia mpifoka sigara dia ny mavo nify. Mety ho sarotra ny mitandrina ny fotsy nify raha mifoka. Miala ny fifohana sigara no tena sarotra, fa samy tsy sigara ianao hanamaivana ny vokatry amin'ny nify.
SOSO-KEVITRA! Mividy ny herinaratra borosy nify dia fomba lehibe mba hahazoana fotsy nify. Electronic borosy nify manampy hanaisotra stains avy amin'ny sakafo, divay sy ny sigara vokatra tsara kokoa noho ny boky borosy nify.
Miborosy nify tsy tapaka raha manana smile.Food lehibe sy ny zavatra hafa dia afaka manorina eo amin'ny nify sy discolor na hampietreny azy ireo rehefa afaka fotoana. Tokony tsy ho voakasiky amin'ny discoloration raha mbola ianao foana miborosy nify.
Jereo fa misy fahatsapana ao amin'ny nify sy ny ramy rehefa mampiasa ravin Whitening toothpastes na ao an-trano. Raha izany no mitranga, mitady vokatra izay tsy manana betsaka ao aminy peroxyde. matetika, kely ireo vokany dia hanjavona andro vitsivitsy taorian'ny Hianao vao mampiasa ny vokatra.
SOSO-KEVITRA! Fantaro ny fomba voafidy tsara ny nify Whitening fomba manao. Mety ho diso fanantenana ianao raha manantena mihoatra noho ny Whitening fomba mahavonjy.
Andramo fanilihana ny nify sasany frezy ranom. Izany no fomba iray mora vidy Somary mba hahazo ny tsiky foana ianao te.
Nify karazana verinia dia ahitana ny akora-mineraly afaka hisorohana ny aretina ny fakany sy ny loza hafa izay afaka manimba nify. Misy zavatra simika in Whitening vokatra, anisan'izany ny mafy amine, Mety hanimba ny karazana verinia ka hahatonga ratsy hafa vokatry.
SOSO-KEVITRA! Izany dia hevi-diso miely patrana izay mampiasa voasarimakirana sy ny sokay ranom no fomba tsara noho ny fahazoana ny nify mamirapiratra, fa izany dia tsy marina ny raharaha. Tsy marina toy ny raha mbola afaka mahafotsy ny nify somary, dia mety hampidi-doza ihany koa.
Raha haingana sy ny vokatra dia ny tampony nify-Whitening laharam-pahamehana, dia tokony hitsidika ny dokotera avy hatrany. Whitening ny nify dia tsy mora foana ny fikasana tarehy. Tsy nahita ny mpitsabo nify, ianao vy very manimba ny nify sy ny fahasalamana ankapobeny am-bava rehefa mandeha ny fotoana.
Ataovy azo antoka ianao floss tapaka. Flossing Tena fitaovana manampy amin'ny takela-pahatsiarovana fanesorana izay, mifandimby, Afaka Manampy hisorohana staining ny nify. Get ao zatra flossing isan'andro, ary mitondra ny sasany aminareo ampiasaina isaky ny sakafo. Aza adino ny floss ny nify alohan'ny alohan'ny hatory, mba tsy mamela ny bakteria mba hijanona eo amin'ny nify mandritra ny alina.
SOSO-KEVITRA! Andramo mihinana sakafo crunchier. Afaka ny ho tonga bebe kokoa Teeth fotsy avy mihinana seleria, paoma sy ny karaoty.
Whitening nify penina mety ho tsara fomba mahafotsy ny nify. Mitandrema ny amin'ny vokatry ny gel, rehefa mampiasa gels ianao satria mitovy ny eau de Javel. Tsy maintsy mampiasa ny mitandrina amin'ny fomba io, ary ho azo antoka tsy manao izany loatra matetika.
Afangaroy ranom-boasarimakirana sy latabatra sira ho namboarina Whitening vokatra. Tandremo ny mifangaro Nofehezina tany amin'ny fitoeran-javatra, ary mampiasa azy io rehefa mandeha ny fotoana amin'ny ahiahy vitsivitsy momba izany: Fandravana.
SOSO-KEVITRA! Teeth whiteners tokony tsy ho ampiasaina mandra-naka hevitra amin'ny mpitsabo nify. Mety ho hitanao fa ianareo rehetra ilaina ho an'ny fotsy hoditra mamirapiratra dia tsara fanadiovana.
Ny herinaratra borosy nify no tsara noho ny fomba lehibe mba hanazava ny tsikinao. Electric borosy nify madio nify tsara ary matetika ampiasaina mba hanesorana ambangovangony discolorations ny teeth.They madio loko mavo eny rehetra tsy ho etỳ ambonin'ny faritra ny nify.
Alaviro dite sy kafe mba tsy staining ny nify. Ireo zava-pisotro discolor nify rehefa misotro azy mihitsy.
SOSO-KEVITRA! Taorian'ny sakafo mitsako hihy mba hitandrina ny nify fotsy sy madio. Maro ramy izay ahitana Whitening mpiasa izay tsikelikely lamaody discolorations.
Aza manaiky ho voafitaka ny toothpastes izay dokam-barotra toy ny nify Whitening. Mety hanampy ny mahafotsy ny nify, fa ianao no mila hampiasa azy ireo izay mitohy amin'ny fomba hafa. Raha te Whitening toothpaste, mikiry izay mofo misy soda.
Mety hanandrana fanilihana ny nify mampiasa ny Peel ny akondro. Maro ny olona mahita izany tsotra fitaka mba ho tena mandaitra. Hahosotrao ny ao anatiny ny akondro Peel noho ny nify mba mahafotsy. dia, manaraka tsy tapaka miborosy. Ny vokatra Whitening dia ho toa avy hatrany.
SOSO-KEVITRA! Search for nify Whitening vokatra ao an-tokotany raha tokony ho ny Drugstore. Ny hodi-kazo avy amin'ny hazo tsara Walnut fantatra noho ny fanafoanana stains avy amin'ny nify.
Miborosy nify mivantana rehefa mifoha, ary raha vao ianao te-handeha ho any am-pandriana ny mahita ny nify mahazo fotsy.
Ataovy azo antoka ny tsy hampiasa ny nify Whitening rafitra raha toa ianao na inona na inona sehatra ny vohoka na ny fampinonoana. Miandry sy ny mampinono no tena saro-pady ramy. Ankoatry ny, ny zavatra simika hita ao amin'ireo vokatra mety ho olana. Tsy, fotsiny foana ny tsikinao mamirapiratra amin'ny tsara sy ny flossing miborosy fahazarana nandritra ny fotoana manokana io. Afaka misafidy foana fa ny nify whitened araka ny bevohoka na ny mpitsabo mpanampy ny fotoana dia tanteraka.
Fantaro izay tokony antenaina avy amin'ny nify Whitening fomba no hataony ho anao. Afaka hiafara ho fahadisoam-panantenana raha mitaky be loatra amin'ny. Anontanio ny mpitsabo nify izay hitranga.
Nify karazana verinia miaro ny nify amin'ny aretina ny fakany sy ny loza hafa izay afaka manimba nify. Products izay misy asidra ambony na zavatra simika misy poizina hafa azo manimba ny nify mihoatra noho izany dia hanampy azy ireo.
Mahazo ny fotsy nify tianao dia mety ho lafo vidy, ary somary ny manahirana. Maro ny fitaovana sy ny fomba dia avy any mba hanampy anao hahazo fotsy nify. Amin'ny alalan'ny fampiharana ireo toro-hevitra, afaka mahazo fotsy nify nefa tsy mandany ny vola eo amin'ny matihanina vahaolana.
Sokajy: Home Miorina amin'ny mahafotsy Nify Tags: Esory Discoloration, Esory Teeth Stains, nify Stains